Sina Syk1224 4 Pirinty fanontana miloko fanoratana miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy | Xinguang
Tarika famahanana taratasy
Fantsona fanapahana maty
Machine Feature ：
Ny fitaovam-pandefasana dia mampiasa vy vy 40 Cr, 20GrMo Ti avo lenta izay nototoina, ary aorian'ny fitsaboana hafanana, afaka hatramin'ny enina ambaratonga izy io.
Ny rafitra fanosorana masinina dia mampiasa fanosorana automatique automatique, ary miaraka amin'ny fitaovana tsy azo idiran'ny andrim-pitrandrahana solika.
Ny singa tsirairay ao amin'ilay masinina misy fisarahana herinaratra, ary ny fanidiana hidiny amin'ny pnemika, ny hidiny tanteraka hidin-trano, mba hiantohana ny fitoniana ao amin'ilay singa, ary manohy peratra fitandremana rehefa nosarahana ny masinina, mba hiantohana ny fiarovana ny olona miasa.
Isaky ny masinina misy fanakanana fijanonana vonjy maika, noho izany dia azo ajanona eo anelanelan'ny singa ilay masinina, afaka miantoka ny filaminan'ny mpiasa izy io (fanamarihana: ny singa rehetra mihetsika dia tarihin'ny vondrona feeder)
Mfanontana famaky FARITRY NY
Mhaben'ny taratasy famahanana famaky
Taratasy famahanana amin'ny skip
Mamin'ny famahana haben'ny taratasy
1) Fanontana ny horonan-tsarimihetsika matevina vita amin'ny rindrina matevina vita amin'ny rindrina matevina, fanamafisana ny tany, fikosoham-bolo, fametahana chromium mafy.
2) Ny famaky rehetra dia manitsy amin'ny fifandanjana mavitrika, ny milina mandeha maharitra.
3) Mikarakara pirinty, ny switch an'ny tongotra dia mety ary miovaova ny fanaraha-maso herinaratra.
4) Fanontam-pirinty, fanesorana ny roller namboarina namboarina, ny takelaka mizana dia mampiseho ny angona.
5) Pirinty vita amin'ny pirinty vita amin'ny pirinty, amin'ny alàlan'ny mekanisma famonoana pneumatika. Raha misaraka ny masinina na manamboatra ny dingana, ny freins dia afaka mametra ny fihodinan'ny sehatr'ilay milina ary mitazona ny teboka raikitra amin'ny toeran'ny gears tany am-boalohany.
Roller vita amin'ny kodiarana: ny faran'ny roller dia fantsom-by izay tototry ny fingotra mahazaka akanjo. Ny fananganana antonony sy ny fikolokoloana manokana ny fikosoham-bolo dia misy fanaparitahana ranomainty mahomby.
Ny rojo vy dia mandray kodiarana varimbazaha vita amin'ny varimbazaha avo lenta.
Napetraka miaraka amin'ny milina fanodinana roller roller ink mba hialana amin'ny maina an'ny maotera lehibe mandritra ny fijanonany.
Sampana fanaovana slot:
Ny fiasan'ny vatan-tsolika misy tsanganana roa (unit adoption). Ny boaty baoritra lehibe na ny fametahana baoritra dia afaka mamonjy fotoana antsy.
Ny fizarana Slotting sy ny fanitsiana ny boaty baoritra avo, azo fehezina ny solosaina sy ny isa elektrika.
Antsy an-tsokosoko miaraka amina firosoana miampita, alefaso amina axis linear izay mora kokoa sy marina kokoa ny finday.
Ny antsy ambony sy ambany dia mihetsika miaraka amin'izay, tazomy ny fifandraisana amin'ny antsy, marina, manitatra ireo fitaovam-piainana amin'ny serivisy.
Toerana famonoana antsy antsy, solosaina ary fanitsiana elektronika niomerika ho azy.
Mihetsiketsika mifanindry ny antsy apetaka amin'ny alàlan'ny avo roa heny hisorohana ny fiarovana amin'ny fifandonana (elektronika sy mekanika).
Firafitra elastika sy zorony manapaka firafitra, sosona telo sy dimy sosona tsy manitsy sy miasa mety kokoa.
Kodiarana tsipika, antsy mihetsiketsika mihetsika amin'ny alàlan'ny fanitsiana, fanaraha-maso elektrika.
Fanamafisana ny elanelam-baravarana amin'ny fanaraha-maso ny solosaina sy ny elektronika nomerika (safidio ny fanahafana).
1 antsy maty horonana (horonan-taratasy ambany)
Ny savaivony ivelany dia ￠ 360㎜
Fanitsiana mandanjalanja, ampitomboy ny fiorenan'ny asa.
Azo ampiharina amin'ny haavon'ny 22.5 mm.
Roller amin'ny ondana (roller ambony)
Ny savaivony ivelany dia ￠ 388.9㎜.
Fitotoana vy ambonin'ny fikolokoloana, fametahana chromium mafy.
Fanitsiana ny fahazavana amin'ny alàlan'ny horonan-taratasy maty.
Ny hatevin'ny pad dia 8 mm ary 125 mm ny sakany
Fitaovana milomano miova 40-mekanika.
1.Niorina rafitra Stretch.
2.Ny dingana amin'ny famonoana maty dia ahitsy amin'ny alàlan'ny LCD micro-computer Electric-Digital 360 degree. (Fandidiana sy fijanonana azo ovaina)
3. Ampifanaraho amin'ny tanana ny toeran'ny sisiny, ahitsy ny elanelana hatramin'ny 20 mm.
Lisitr'ireo moto sy faritra ilaina amin'ny antsipiriany ：
Famahanana taratasy Sampan-draharahan'ny
1. Moto lehibe
Motera miovaova matetika18
2. Fanokafana sy famaranana ny masinina
0.75KW 59/1 maotera maotera
4. Fanitsiana ny boaty fiadiana aoriana
0.18KW 1/25 Gear motera
5. Fanalana fanesorana vovoka
0.37KW 15/1 maotera maotera
1 / loko
2. tsy mandeha amin'ny gilasy
0.75KW maotera maotera 43/1
2. Fihetsiketsehana lohan'ny loha fanapahana
0.37KW maotera maotera 40/1
3. Fanitsiana ny haavon'ny baoritra
0.37KW 1/40 Gear maotera
Sampana fanapahana maty
2. Fanamboarana ny paoma vita amin'ny fingotra
3.Pompa diaphragm pneumatika
Renirano Jinchang any Wuhan
Peratra fifandraisana 7.Keyless
8. Fanaraha-maso mahery vaika
10. Roller lamba metaly
11.Tapitra vita amin'ny kofehy voapaika
Fanamarihana: manana compresseur rivotra ny mpanjifa.
Tanana sandry 1
〖1〗 afaka misafidy fiasan-tanana na mandeha ho azy.
Belt 2〗 fifandraisana fehikibo sandry, tsy miankina amin'ny halavan'ny fehikibo ny tsy fetezan'ny halavan'ny fehikibo.
Fampiakarana fandriana 2
〖1 drive kapila mafy。
〖2 height haavo mihombo1600㎜。
〖3〗 Ny motera manainga fandriana dia omena fiasan'ny frein, ary ny latabatra fandriana dia azo tazonina amin'ny toerana raikitra ary tsy hikorisa
〖4〗 mametraka fitaovana fiarovana, fiarovana fandriana ao anaty fifehezana, hiantohana ny fiarovana ny mpiasa miasa.
〖5〗 Fehikibo miakatra mitafo poety manakana ny baoritra tsy hidina。
3 Mandray baffle
Paper 1〗 taratasy fihetsika fanerena baffle mampisaraka, tafangona hatramin'ny hahavony efa voafaritra mialoha ao anaty baoritra, manalalaka ho azy ny paleta taratasy, tazomy ilay baoritra.
〖2〗 fanitsiana amin'ny tanana ny toeran'ny baffle any aoriana.
Teo aloha: Wj 200 1800 Tsipika famokarana baoritra mitafo